Imbali yeGrike uThixo uZeus
Oko Kufuneka Ukwazi NgoThixo WesiGrike uZeus
Izulu kunye neNdudumo kaThixo
Unkulunkulu ongumGrike uZeus wayengunkulunkulu ophezulu wama-Olympian kwisiGrike samaGrike. Emva kokuba athathe ikhredithi ngokukhulula abazalwana noodadewabo koyise uCronus, uZeus waba ngukumkani wasezulwini waza wanika abazalwana bakhe, uPoseidon kunye neHayidesi, ulwandle nolwandle, ngokulandelanayo, kwiindawo zabo.
UZeus wayeyindoda kaHera, kodwa wayenemicimbi emininzi namanye oothixokazi, abafazi abafayo kunye nezilwanyana zezilwanyana. UZeus uxoxisana nabanye, uAegina, uAlcmena, uCalope, iCastoopea, iDemeter, iDione, i-Europa, iIo, iLeda, i-Leto, i-Mnemosyne, i-Niobe, ne-Semele.
Kwilizwe lamaRoma, uZeus ubizwa ngokuba yiJupiter.
UZeyus unguyise woothixo nabantu. Unkulunkulu wasezulwini, ulawula umbane, awusebenzisa njengesikhali, neendudumo. Uyinkosi entabeni yaseOlimus, ikhaya lezithixo zamaGrike . Kwakhona ubizwa ngokuba nguyise wamaGrike namaqabane amaGrike amaninzi. UZeus udibene nabantu abaninzi kunye noodadekazi kodwa watshata noodadewabo uHera (Juno).
UZeus unyana weTitans Cronus noRhea. Nguye umzalwana wakhe uHera, nabanye oodadewabo uDemeter noHestia, nabazalwana bakhe iHayidesi kunye noPoseidon .
Igama lesiRoma lika Zeus nguJupiter kwaye ngamanye amaxesha u-Jove. I-Jupiter icingelwa ukuba yenziwe ngegama elingu-Proto-Indoeuropean ngoothixo, * deiw-os , elidibaniswe nelizwi likayise, ubaba , njengoZeus + Pater.
UZeus uboniswa ngeendevu kunye neenwele ezinde. Ezinye iimpawu zakhe ziquka intonga, ukhozi, i-cornucopia, i-aegis, inkunzi yemvu kunye nengonyama.
I-cornucopia okanye (ibhokhwe) uphondo lwento eninzi luvela kwibali likaZeus ekusaneni kwakhe xa ekhulelwe ngu-Amalthea.
UZeus unkulunkulu wasezulwini olawula ukulawula imozulu, ingakumbi imvula nombane. UnguKumkani onothixo kunye nonkulunkulu wee-oracle - ngakumbi kwi-oki engcwele eDodona. Kwibali leMfazwe yeTrojan , uZeus, njengejaji, uphulaphula amabango abanye onkulunkulu ekusekeleni icala labo. Emva koko uguqulela izigqibo malunga nokuziphatha okwamkelekileyo.
Uhlala engathathi hlangothi ixesha elide, evumela ukuba unyana wakhe uSarpedon afe kwaye azukise yena, uHector .
Etymology ka Zeus noJupiter
Ingcambu yobabini "uZeus" kunye ne "Jupiter" iguqulelwe kwi-proto-Indo-Yurophu igama elibhekiselele kwimiqondo yabantu "yosuku / ukukhanya / isibhakabhaka".
UZeus utshisa abantu
Kukho iingcinga ezininzi malunga noZeus. Eminye ibandakanya ukufuna ukuziphatha okuvunyelweneyo kwabanye, nokuba ngabantu okanye ngoThixo. UZeus wayecaphuke ngokuziphatha kuka- Prometheus . I-titan yayikhohlise uZeus ekuthatheni isabelo esingeyona inyama yombingelelo wokuqala ukuze uluntu luzonwabela ukutya. Ekuphenduleni, ukumkani oothixo wayenqabile uluntu ukusetyenziswa komlilo ukuze bangenakukwazi ukuyoliswa yintliziyo ababeyinikezelwe yona, kodwa u-Prometheus wathola indlela ejikeleze le nto, waza wabiba ngomlilo oothixo. kwisigxina se-fennel uze uyinike abantu. UZeus wajezisa u-Prometheus ukuba unesibindi sakhe sagxotha yonke imihla.
Kodwa uZeus ngokwakhe usebenzise kakubi - ubuncinane ngokwemigangatho yabantu. Kuzama ukuthetha ukuba umsebenzi wakhe oyintloko kukukhohlisa. Ukuze ahlaziye, ngamanye amaxesha wayeguqula isimo sakhe kwisilwanyana okanye kwintaka.
Xa wayefakela uLeda, wabonakala njengentlanzi [bona uLeda ne Swan ].
Xa wayithatha uGanymede, wabonakala njengokhozi [bona uZeus noGanymede ] ukuze bathathe uGanymede endlwini yothixo apho wayeyothatha isikhundla sikaHebe njengomgcini wewayini; kwaye
xa uZeus ethatha i-Europa, wabonakala njengenkunzi entsha
[bona i-Europa kunye noZeus] - nangona kutheni abafazi baseMeditera baxhaswa kakhulu ngeenkunzi zeenkomo ezingaphezu kwamandla okucinga okule ndawo yokuhlala-edolophini-ehamba phambili ekufuneni kweCadmus kunye nokulungiswa kweThebes . Ukuzingela i-Europa kunika enye ingqungquthela yokwazisa iincwadi kwiGrisi.
Imidlalo yeOlimpiki yayibanjwe ekuqaleni ukuhlonipha uZeus.
U-Aphrodite - UThixokazi ongumGrike woLuthando noBumnandi
Ngubani owayengumfazikazi ongumRoma waseForuna?
Iiprojekthi zoPafo lweNyanga
Isingeniso kwiNgqapheli yabathengi
I-Beltane History - Ukugubha iMeyi yoMhla
Ukubaluleka kwamaFats kunye neMithetho yoLwabiwo lweZiseko zoPhuhliso lweZakhiwo zokuLawulwa kwamafutha
Iintlobo zeeBass Instruments
Iicigars eziPhambili kunye neeNqabile ezingavamile
Iqoqo leStencil Free Simahla: Cat Stencils
I-Funniest Memes Ukuphendula kwi-Trump's Golden Showers Scandal
I-Burning Bubbles Science Project